हे कोरोनेश्वर प्रभु ! | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
हे कोरोनेश्वर प्रभु !
२०७७ भाद्र २६, शुक्रबार ०७:४१ गते
नोबल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वलाई त्राहिमाम् त्राहिमाम् बनाइरहेको अवस्थामा मानिसलाई रोगको डरले भन्दा भोकको डरले सताएको छ । ती भोका मानिसहरुको वर्गमा पर्छ बोर्डिङ स्कुलको निरीह मास्टर पनि । कोरोनाको कहरसँग निजी आवासीय विद्यालयहरु बन्द भएको गन्दा पनि एउटा हातका औँलाले भ्याउन छोडिसकेछ । कहिले महिना मर्ला अनि खान पाइएला भनी औँला गन्दै जीविकोपार्जन गर्ने मास्टर यतिदिनसम्म विद्यालय बन्द भएपछि मर्नु न बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । थाहा सबैलाई छ, बुझेको सबैले हो तर दुर्भाग्य ! बोलिदिने कोही छैन । दुई–चार दिनअगाडि मैले पनि सुनेको थिएँ । अब मास्टरले आन्दोलन गर्ने रे ! भकारीमा चामल भएका दुई–चार जना दुई–चार दिन आन्दोलन गर्न हिँडे रे पनि, तर के गर्नु ! भोको पेटले आन्दोलन त हुँदैन । फेरि के गर्नु, कोरोनेश्वर प्रभुको श्राप यति नै बेला प¥यो ।
समाजका संवाहक, असल चरित्र निर्माता, दक्ष जनशक्ति उत्पादक जति शब्दको माला लगाए पनि भोको पेट त भरिँदैन । सरकारको हेराइमा राहत प्राप्त गर्ने वर्गमा पनि पर्दैन । सम्मानित पेसा, सम्मानित वर्ग, शिक्षित वर्ग यस्ता गुणैगुणले युक्त भएका शिक्षक बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकको दुर्दशा न सुनिसक्दो छ, न त भनिसक्दो छ । अहिले यति भनिदिए पुग्छ कि हे सरकारहरु ! बोर्डिङका मास्टरलाई बाँच्न देऊ । बाँच्ने वातावरण मिलाइदेऊ । कम्तीमा ऋण खाने वातावरणको व्यवस्था त गर्न सक्छौँ, त्यतिमात्र भए पनि गरिदेऊ ।
हिजो चुनावमा तिमी नै होइन गाँस, बाँस र कपासको व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरी तिनै मास्टरलाई अघिपछि लगाएर हिँड्ने, अहिले के भो ? सबै कुर्सी र शक्तिले स्मरण खाइदियो ? यदि कतै विवेकशून्य भइसकेको छैन भने अझै सोच कि ती निरीह बोर्डिङका मास्टरका पनि घरमा छोराछोरी छन्, वृद्ध बुबाआमा छन् र घरमा श्रीमती छे; तिनीहरुले पनि खानुपर्छ । तिनीहरुले पनि कोरोनेश्वर प्रभुको श्रापबाट बच्नुपर्छ । तिनीहरुलाई पनि बाँच्ने इच्छा छ ।
हुन त, सबै शिक्षकलाई एउटै वर्गमा राख्नुपर्ने हो, तर त्यो हाम्रो देशमा सम्भव छैन । किन भनेर प्रश्नको होचो मलाई नदेखाउनुहोला । सक्नेले शिक्षामन्त्री तथा उद्योगमन्त्रीलाई देखाए हुन्छ । अनि अरु वर्ग पनि छन् नि दैनिक जीविकोपार्जन गरेर जीवन धान्ने वर्ग भनेर पनि नभन्नुहोला, किनभने आजको मेरो विषय त्यो पनि परेन । प¥यो त केवल बोर्डिङको मास्टरको । जो निमुखा छ, स्वयम् हक्की बन्ने पाठ पढाउँछ र आफू सधैँ डराउँछ । अन्यायको विरूद्ध लड्न सिकाउँछ, तर आफू अन्याय सहन्छ । त्यसको प्रतिकार गर्न सक्दैन, किनभने उसले बुझेको छ कि ऊ जित्न सक्दैन । सामन्तवादी र पुँजीपतिका अवशेषको महसुस उसले गरेको छ । दुनियाँका सामु मास्टर भएर आदर्श छाँटिरहँदा मनमनै भक्कानिनु परेको सत्यलाई ऊ कहाँ सजिलै बिर्सन सक्छ र ? त्यसैले निरीह छ, भोको छ तर पनि मौन छ ।
त्यसैले हे कोरोनेश्वर प्रभु ! तिमी नै एकमात्र विकल्प छौ, बोर्डिङका मास्टरको दयनीय अवस्थामाथि करूणा गरी तिमी चटक्क छोडेर वुहानतिर लाग । तिमीसँग पौँठेजोरी गर्ने शक्ति बोर्डिङका मास्टरसँग छैन । दिनभरि कराउनेमात्रै क्षमता भएका मास्टरहरु आजभोलि खान नपाएर लिखुरे भएका छन् । कुच्चुक्क परेको कोठामा रातदिन बसिरहनु परेको अवस्था छ । बूढीको भान्सा र बाबुआमाको औषधिले दिनदिनै उसको टाउको खाएको छ । छोराछोरीको नजरमा बेकामे गरिब बाबु बनेको छ । खनीखोस्री गर्ने, मेलापात जाने ठाउँ छैन । पुरानो टिभीमा रिचार्ज गर्न सकेको छैन । किनेर खाऊँ पैसा छैन, मागेर खान जानेकै छैन । लुट्न स्वाभिमानले दिँदैन । त्यसकारण, हे प्रभु दया गर । कतैबाट खान पाए र बाँचे भने बेसारपानीको जलधारी गर्लान् । गुर्जाे, अदुवा, बेसार, ज्वानो, लसुन, तुलसी, अमला, धनियाँ र दालचिनी खुवाएर मास्टरले पालेका बूढाबा भन्दै थिए– “हे कोरोनेश्वर प्रभु ! तिम्रो लीला अपरम्पार छ, तिमी साँच्चै सर्वशक्तिमान् छौँ, अदृश्य, अथाह तिमी सर्वव्यापी छौँ ।” कोरोनेश्वर प्रभुको जय !